Environnement : Le retour à la normale de l’épaisseur de la couche d’ozone prévu en 2050 - ewa.mg
News - Environnement : Le retour à la normale de l’épaisseur de la couche d’ozone prévu en 2050
Les responsables auprès du MEDD a fait appel à la prise de conscience collective dans le cadre de la protection de l’environnement.
La couche d’ozone, qui nous protège des rayons ultraviolets, pourrait se reconstituer d’ici 2050. D’après le point focal national Ozone du bureau nationale Ozone auprès du Ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD), Rivo Rabemananjara, les efforts menés dans le monde entier dont la réduction de la production et l’utilisation des chlorofluorocarbones (CFC) et autres substances responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone (SAO) sont déjà un grand pas vers sa guérison. Pour ce qui est du cas de Madagascar, le MEDD a élaboré et mis en œuvre le Programme ozone du pays (PP). Il comporte diverses actions permettant de gérer et d’éliminer les SAO sur le territoire national. Ce responsable a indiqué que c’est une action conjointement réalisée par de nombreuses entités comme le secteur privé, la société civile, la direction générale de la sécurité routière ou encore l’union des frigoristes de Madagascar. La Grande Île a également ratifié la convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone et le protocole de Montréal relatif aux SAO en novembre 1996. Madagascar est actuellement en train de lancer la procédure de ratification de l’amendement de Kigali sur les Hydrochlorofluorocarbones (HFC). Ces points ont été évoqués hier à Ampandrianomby en marge de la célébration de la journée mondiale de la protection de la couche d’ozone.
Pollution. Concernant la qualité de l’air, sa dégradation est un phénomène qui a été constaté depuis ces dernières années surtout dans la Capitale et ses périphéries. De nombreux facteurs sont à l’origine de cette pollution atmosphérique comme la recrudescence des feux de brousse, la briqueterie, ou encore l’émanation des gaz d’échappement des voitures. D’après les données relevées à travers les matériels de détection des concentrations des particules fines au niveau de six sites de la Capitale, c’est le quartier d’Ambohidahy qui est le plus exposé aux pollutions atmosphériques. Parmi ces sites il y a entre autres Andranomena, Soanierana, Andraharo, Ambatobe, ou encore Ampandrianomby. Ces matériels ont été mis en place par la Direction générale de la météorologie depuis l’année 2020.
L’article Environnement : Le retour à la normale de l’épaisseur de la couche d’ozone prévu en 2050 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Rugby: hitondra ny Tam Anosibe i Berthin Zoto
Fantatra izao fa hanazatra ny ekipan’ny Tam Anosibe, ho an’ity taom-pilalaovana 2021/2022 ity, Rafalimanana Berthin (Zoto). Raha tsiahivina, mpanazatra ny Makis de Madagascar “senior” lehilahy tamin’ny fotoan’androny i Berthin Zoto, ka efa nandrombahan’ny Malagasy ny ho tompondakan’i Afrika, ny taona 2012.Olona tsy vaovao amin’ity fileovan’Anosibe ity i Berthin Zoto satria efa nisy fotoana nitondrany azy ireo. Mahalala tsara ny Tam Anosibe ihany koa ity mpanazatra ity satria efa betsaka ireo mpilalao novolavolainy tao, raha tsy hilaza afa-tsy ry Coco sy ry Douglas izay efa nodimandry.Tsiahivina fa ekipa efa nandrombaka ny ho tompondakan’ny ligin’Analamanga sy i Madagasikara ny Tam Anosibe. Efa niatrika ny fifaninanana niadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina ihany koa. Namoaka mpilalao maro nandrafitra ny Makis de Madagascar ny Tam Anosibe.Na teo aza izany, tamin’ity taona ity indray vao miverina ao anatin’ny “Top 20”, hiatrika ny fifaninanam-pirenena ho an’ny “Federal 1” ny Tam Anosibe. Ao anatin’ny vondrona “B” ny Tam Anosibe, miaraka amin’ny 3FB, ny STM, ny Mang’Arts ary ny XV Avenirs. Hanomboka ny asabotsy 21 aogositra ho avy izao ny fifanintsanana ho an’ity “Top 20 Federal 1” ity. TompondakaL’article Rugby: hitondra ny Tam Anosibe i Berthin Zoto a été récupéré chez Newsmada.
Atsimo: hotohanana ny fanabeazana mialoha ny sekoly
Hiompana bebe kokoa amin’ny fanabeazana mialoha ny sekoly ny asa hataon’ny Unicef ho an’ny faritra telo : Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana, amin’ny taona 2019, miaraka amin’ny tohana ara-bola nomen’ny fanjakana norvezianina. Iantefan’ny asa ny sekoly miankina amin’ny fanjakana tafiditra amin’ny tetikasa fanabeazana ho an’ny rehetra , nanomboka ny taona 2015 ary nifarana ny amin’ity taona ity. Hitohy mandritra ny herintaona indray ny fandaharanasa, ampiasana vola 6 tapitrisa dolara ary hanatanteraka ny asa ny Unicef, ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam) ary ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny asa (BIT) eto amintsika. Ho voasahana ao avokoa ny kalitaon’ny fampianarana, ny fahazoan’ny kilonga fanabeazana ary ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ny mpanabe any Atsimo. Anisan’ny asa hotanterahina ny fanorenana efitrano fianarana, ny fametrahana toeram-pisakafoana any an-dakilasy, fanomezana odikankana ny mpianatra, ny fanofanana ny mpanabe miaraka amin’ny fampitaovana azy ireo, araka ny fanazavan’ny lehibien’ny sehatry ny fanabeazana ao amin’ny Unicef, i Sophie Achilleas, omaly teny Andraharo. « Efa nanao laharampahamehana ny fanabeazana ny fanjakana malagasy ka vonona hanohy ny asa natomboka ny taona 2015 ny fanjakana norvezianina », hoy ny tomponandraiktra ao amin’ny masoivohony eto amintsika, i Johan Meyer. « Tsapa fa nisy ny vokatra azo avy amin’ny tohana natao hanatsarana ny fanabeazana ary hitako izany nandritra ny fijerena ifotony ny asa tany Atsimo », araka ny nambarany ihany. Tsy maintsy tanterahina ny PSE Nanamafy kosa ny solontenan’ny Unicef eto amintsika, i Michel Saint-Lot fa lalana tsy maintsy hizorana ny fanatanterahana ny tetipivoarana ho an’ny fanabeazana (PSE) ary zava-dehibe ny fampiasana ny tenin-dreny ho an’ny telo taona voalohany any an-dakilasy. Tao anatin’ny taona maro, tsapa fa nihemotra ny kalitaon’ny fanabeazana ka vahaolana ny PSE. Raha tanteraka ny fanabeazana ny ankizy ho an’ny sivy taona tsy miato, hivoatra ny fahaizan’ny tanora malagasy. Natao sonia, omaly, teny Andraharo ny fanomezan’ny Norvezianina ny vola hamatsiana ny tohin’ny asa any Atsimo ho fanatsaranan ny fanabeazana. Tao anatin’ny efa-taona, 128 ny efitrano fianarana tafatsangana ary 70 000 ny mpianatra nahazo sakafo tany an-dakilasy. Hitohy ny tohana ho an’ny taona 2019. Vonjy L’article Atsimo: hotohanana ny fanabeazana mialoha ny sekoly a été récupéré chez Newsmada.
Fivadihana fiara :: Zaza telo volana namoy ny ainy teo am-pofoan-dreniny
Nody amin-dranomaso sy alahelo tanteraka ireto mpivady namoy zanaka tampoka teny an-dalana. Nivadika ny taksiborosy niarahan’izy telo mianaka tany amin’ny lalam-pirenena fahafito hiditra an’Ambatofitorahana Ambositra, afak’omaly tolakandro. Maty teo am-pofoan-dreniny ilay zazavavy, telo volana. Mpandeha vitsivitsy no naratra. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro ny filaminana ny fanadihadiana momba ity voina ity. “Fiara fitaterana avy any Ambositra nikasa hihazo an’i Fianarantsoa io niharam-boina io. Olana teo amin’ny hisatra, rehefa nandeha tamin’ny fidinana, no voalaza hatreto ho antony nahatonga ny loza. Nivadika teo an-tsisin-dalana ny fiara. Nipetraka teo amin’ny sisiny tandrifin’ny varavarana ny olona telo mianaka. Voatsindry ary namoy ny ainy teo no ho eo ilay zazakely. Mpandeha efatra no voamarina fa naratra, ankoatra ireo efa nifamonjena any amin’ny hopitaly”, hoy ny zandary any Ambatofitorahana nanao ny fizahana. Fianakaviana sahirana avy any Mananjary ireto namoy zanaka. Voalaza fa nanampy sy nanatitra azy ireo ny mpamily ary efa niverina hiatrika ny famotorana any amin’ny zandary. L’article Fivadihana fiara :: Zaza telo volana namoy ny ainy teo am-pofoan-dreniny est apparu en premier sur AoRaha.
Nihaona ny tomponandraikitra sy ny mpianatry ny ENS: miandry ny tetiandro hamadihana ny “protocole” ho “décret” ny mpianatra
Mafampana ny tontolon’ny fampianarana ambony. Raha niverina an-databatra nivory niaraka amin’ny tomponandraikitra ny eto Antananarivo nitady vahaolana, nisavorovoro koa ny any Antsiranana nanamafy ny fitakiana iraisana.Taorian’ny hetsika mafampana ny alarobia lasa teo nataon’ny mpianatry ny ENS momba ny fitakian’izy ireo handraisana mpampianatra mpiasam-panjakana ireo rehetra nivoaka ka nahazo fiofanana, niroso amin’ny dinika ambony latabatra ny telo tonta (minisiteran’ny Fampianarana ambony, minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ary ny solontenan’ny mpianatra ENS), omaly. Nitarika ny fihaonana ny sekretra jeneralin’ny minisitera roa voakasika. Hametraka vaomiera manokana hidinika ny fangatahan’ny mpianatra ny minisitera roa tonta, miaraka amin’ny minisiteran’ny Asa sy ny asam-panjakana ary ny minisiteran’ny Toekarena sy ny tetibola, araka ny fampitam-baovao azo. Nanaiky ny mpivory rehetra fa nisy ny “protocole d’accord” napetraka ny taona 2018 momba ny fandraisana ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana “licence” sy “master 2” ho mpiasam-panjakana raha vantany vao vita ny fianarany. Tokony havadika ho didim-panjakana manakery izany « protocol” izany vao azo ampiharina ka ny vaomiera no hametraka ny tetiandro handrosoana azy hodinihin’ny governemanta. Hitohy anio maraina ny fivoriana sy ny fampahafantarana ny tetiandro. Raha tsy misy ny daty mazava momba ny hirosoana amin’izay lalana izay, hiverina indray ny hetsiky ny mpianatra, araka ny fanazavan’ny filohan’ny fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny ENS, Randrianantenanina Eric. Tokony hisitraka asa avy hatrany ny mpianatra nahazo ny mari-pahaizana “licence” sy “master 2” satria voasoratra ao amin’ny lalàna ny taona 1985 izany. Rehefa niova ho rafitra LMD no nitondrana ny fampianarana eny amin’ny fampianarana ambony, niseho ny olana nanomboka teo ka niafara amin’izao savorovoro izao. Misy solontena avy any amin’ny faritra (Fianarantsoa, Toliara…) manamafy ny hetsika eto Antananarivo. 80%-n’ny mpianatra, nanaiky ny lamina raha naneho ny ahiahiny ny 20% sao famonoana afo fotsiny ilay fametrahana vaomiera manokana. Tafody ny alarobia alina ihany eny anivon’ny fianakaviany ireo mpianatra telo voasambotry ny mpitandro filaminana teny Ampefiloha nandritra ny hetsika. Vonjy A.L’article Nihaona ny tomponandraikitra sy ny mpianatry ny ENS: miandry ny tetiandro hamadihana ny “protocole” ho “décret” ny mpianatra a été récupéré chez Newsmada.
Tsingerin-taona faharoa ny fianianana: nanamafy ny veliranony hampandroso an’i Madagasikara ny filoha
Tsy nandalo fotsiny ny 19 janoary, faharoa taona nanaovan’ny filoha Rajoelina Andry fianianana tetsy Mahamasina, ny taona 2019. Nohamafisiny ny velirano nataony tamin’izany tamin’ny hetsika fambolen-kazo tany Taolagnaro, omaly.“Tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Hitondra fampandrosoana mipaka ho an’ny isambatan’olona isika. Efa maro be ireo tetikasa nentintsika ho fanajana ny velirano natao. Mbola ho maro be ihany koa ny tetikasa hatao hafa hahatrarana an’i Madagasikara mandroso sy hanarenana ny fahataran’ny fampandrosoana an’i Madagasikara », hoy izy tamin’ny lahateniny. Notsiahiviny fa anisan’ny ezaka goavana vita ny fahatrarana ny tanjona 40.000 ha velaran-tany nambolena zanakazo ho an’ny taona 2019-2020. Tafakatra 45.000 ha ny velaran-tany voavoly ho an’io taona io. Hampiakarina 75.000 ha izany ho an’ny taona 2021-2022, araka ny fanambin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana.Mazava ny toromariky ny filoha. “Taonan’ny fikirizana sy ny hafainganam-pandeha ny taona 2021”, hoy izy.Nitarika izao fambolen-kazo natao tao amin’ny “Domaine La Cascade Plantation Lansargues” Manatantely, Soanierana, Tolagnaro izao ny filoha Rajoelina Andry. Lohahevitra amin’izany : « fambolen-kazo ilaina sy manatona ifotony ».Fotodrafitrasa ho an’ny taranakaNanterin’ny filoha fa hiainga any amin’ny toeram-pianarana ny fambolen-kazo. Tokony hiroso amin’ny fambolen-kazo folo ihany koa ny tsirairay. Tanjona ny hahafahana mandrakotra maitso an’i Madagasikara indray.Ankoatra izany, nanatrika ny fiaingan’ireo kamiao miisa 10 nitondra sakafo ho any Atsimo koa ny filoha. Nijery ny fandrosoan’ny asa fanamboarana ny kianjan’i Tolagnaro sy ny fananganana ny Gymnase Arena sport eo Ampasakay avy eo. Efa tafapetraka ny “terrain synthétique” ao anatin’ny kianja, anisan’ny veliranon’ny filoha. “Tsy maintsy hojerena ny fanamboarana ireo “gradin” hanara-penitra sy tsy ho mena mitaha amin’ny hafa”, hoy izy. Efa mandeha koa ny fananganana ny Gymnase, mahazaka toerana 1 000 isa.Novalin’ny filoha ireo milaza fa tsy ilaina ny fotodrafitrasa. “Fotoana izao hametrahana sy hananganana fotodrafitrasa maharitra ho an’ny taranaka. Hitondra fampandrosoana sy ho tombontsoa ary indrindra hitoetra ho an’ny taranaka izany », hoy izy.Mihazakazaka mafy amin’ny taona fahateloNitokana ny lalana rarivato mirefy 2 km sy 100m ao Ampasakay ny filoha avy eo. Ahitana lalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra izany ary nasiana jiro manazava. Nambarany koa fa hatomboka amin’ity taona ity ny lalam-pirenena RN 13 mampitohy an’i Tolagnaro sy Ambovombe.Notsiahiviny fa roa taona izao ny nitondrana ny firenena ka misy hatrany ny fomba fiasa takina isan-taona. “Natao ho fotoana hametrapetrahana ny laminasa ny taona voalohany. Miatomboka mafimafy ny asa ny taona faharoa. Miditra amin’ny hazakazaka mafy ny fanatanterahana ny asa amin’ny taona fahatelo. Efa asa goavana kosa no vita amin’ny taona fahefatra ary efa tsy tratry ny hafa kosa ny asa vita amin’ny taona fahadimy », hoy izy.Synèse R.L’article Tsingerin-taona faharoa ny fianianana: nanamafy ny veliranony hampandroso an’i Madagasikara ny filoha a été récupéré chez Newsmada.